Barcelona oo malaayiin u haysata Neymar - BBC News Somali
Barcelona oo malaayiin u haysata Neymar
Image caption Neymar ayaa dhaliilay guddiga maamula naadiga Barcelona
Naadiga Barcelona ayaa ciyaaryahnkoodii hore ee Neymar u haysta 8.5 milyan oo euro ama 10 milyan oo doolar.
Arrintaas ayaa salka ku haysa u wareegitaankiisii kooxda Paris St-Germain.
Ciyaartoygan reer Brazil ayaa 222 milyan oo euro ama 200 milyan oo gini ugu wareegay naadiga Faransiiska ka dhisan bishan ka dib markii uu gatay qandaraaskiisa.
Barcelona ayaa hadda doonaysa in uu soo celiyo lacagihii abaalmarinta ahaa ee la siiyay markii uu sixiixay qandaraaska cusub ee shanta sano ah sagaal billood ka hor, ka hor intii uusan kooxda ku cadaadinin in uu isaga tago.
"Kooxda ayaa dalbanaysa lacagtaas ay siiyeen ciyaaryahanka maadaama oo uusan dhamaysanin qandaraaskii uu sixiixay. Ayay tiri.
Lacagtaas abaalmarinta ah ee 8.5m euro ah ka sosokow kooxdu waxaa kala oo ay doonaysaa 10% oo dheeri ah maadaama oo la soo daahiyayay bixinta lacagtaas.
Warka qoraalka ah ee ay kooxda Barcelona soo saartay waxaa lagu sii daray "In kooxdu ay codsanayso in masuuliyadda soo celinta lacagtaas ay qaado kooxda PSG haddii uu isaka bixin waayo ciyaartoygaasi."
Paris St-Germain oo mar dambe jawaaabtay ayaa sheegtay "in ay la yaabtay" qoraalka Barcelona, iyadoo intaas ku dartay "In kooxdu ay ku celinayso in iyada iyo Neymar-ba ay u hogaansamayaan dhammaan qawaaniinta jira, ayna mar kale ka xun tahay sida ay u dhaqmayso kooxda Barcelona.
Neymar oo ku biiray Paris St-Germain
Neymar oo ogolaaday in uu bixiyo ganaax lacageed
Dacwadan waxaa la geeyay maxkamadda arrimaha shaqaalaha ee Barcelona 11 Agoosto.
Neymar ayaa dhaliilay go'aanka kooxda ka dib markii uu Axaddii labadii gool ee u horraysay ku dhaliyay garoonka kooxda PSG, iydoo ay kooxdu 6 iyo 2 ku dardartay naadiga Toulouse.
"Afar sano oo qurux badan ayaan kooxda Barcelona la soo qaatay, laakiin arrinta ay wadaan guddiga maamula kooxda lama aqbali karo ayuu hadalka sii raaciyay.